टिपरको संरचना नै दुर्घटना निम्त्याउने छ - प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असार ३१ आइतबार |
काठमाडौं, ३१ असार । अहिले टिपरले दैनिक दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण त्यसको ‘बडी स्ट्रक्चर’ नै हो । मैले धेरै टिपर चालकसँग सोधिसकें । र आफैं पनि चालक सिटमा बसेर हेरेको छु ।
चालक सिटबाट अगाडि बायाँतर्फको सवारी देखिँदैन । अगाडिको बम्पर पाँच फिट लामो हुन्छ । चालकले दायाँतर्फको लुकिङ ग्लासबाट सात फिट उचाइसम्मको सवारीसाधन मात्रै देख्छ । त्योभन्दा कम उचाइको भाग देख्दैन ।
अर्को कारण टिपरको संरचना फलामै फलामबाट बनेको एउटा ढिक्का जस्तै हुन्छ । अर्को सवारीले ठक्कर दिए पनि टिपर चालक जोगिने हुँदा उनीहरूमा अहंता बढी देखिन्छ । यो सँगै अधिकांश टिपरका चालक बढी जसो युवा छन् । अधिकांश साना सवारी टिपरको बायाँ भागबाट ओभरटेक गर्दा दुर्घटना हुँदा भएको देखिन्छ ।
आर्थिक बोझ नहुने भएपछि चालकमा लापरबाही बढेको हो । गाडी बिग्रियो, लाइसेन्स ट्राफिकले लियो, चालकले मान्छे नै मार्‍यो भने पनि सबै साहूले सबै आर्थिक व्ययभार बेहोर्छन् । चालकमा कुनै आर्थिक व्ययभार देखिँदैन।
मान्छे मार्दा पनि चालकको लाइसेन्स निलम्बन नहुने व्यवस्थाका कारण दुर्घटना बढेका हुन् । ट्राफिकले लाइसेन्स समातेको २४ घण्टाभित्र साहू वा चालकलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । दुर्घटनामा मिलापत्र भएपछि गाडी र चालकलाई छाड्नैपर्‍यो ।
तर दुर्घटनाका घाइते ६ महिनासम्म हस्पिटलमा उपचार भइरहे पनि चालकले गाडी निर्बाध गुडाइरहन्छन् । त्यसैले ठूला दुर्घटना निम्त्याउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने नियम आउनुपर्छ । त्यसैले २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
ऐनमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था भए पनि चालक जेलबाट छुट्नेबित्तिकै गाडीको सिटमा बस्ने परम्परा रोक्नुपर्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
​प्रहरीमा नेतृत्वमा भिडन्त, ​सशस्त्र प्रहरीलाई एयरपोर्ट ?
मन्त्रालयमा मन्त्रीको ‘मगरतन्त्र’
पाँचै युवा फसाउने गिरोह एउटै, सुदर्शन गौतम नाइके
सरकारलाई गाली होईन स्याबासी दिनुपर्छः माधवकुमार नेपाल
प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन
यस्ताछन मुख्यमन्त्रीका असन्तुष्टिहरु
यस्तो आयो रिर्पोट, शिक्षा निःशुल्क गर्न प्रहरीर सेनाको संख्या घटाउ
आर्थिक नीति पास भएपछि आज नेपाली कांग्रेसको वैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरिदै
आज हुनेछ सर्वोच्चको प्रमुखको छिनोफानो, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै
निर्मला हत्या प्रकरणः गल्ती गरेको भए बर्दि फुकाल्छुः खनाल
विश्वमा पानीको स्रोत के हो ? सन्दर्भ पर्वतिय दिवस
वार्तामा यमनी सरकार र विद्रोहीबाट करिब १५ हजार कैदीको नाम सार्वजनिक
नियम नमान्ने ट्याक्सी चालकको अनुमतिपत्र निलम्बन गरिने
सय थान राहदानीसहित एक पक्राउ
‘बुद्धिजीवीलाई पेलेर अघि बढ्नु प्रत्युत्पादक’
भीमेश्वर कप कबड्डी बिहीबारदेखि
७० जिल्लामा छनोट सम्पन्न
“सिभिल बैंक लिमिटेड र सुर्या लाईफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता”